Ihe kpatara anyị ji weghachite ma gbanwee ngalaba anyị na Martech.zone | Martech Zone
Ihe kpatara anyị ji weghachite ma gbanwee ngalaba anyị na Martech.zone
Sunday, Jenụwarị 29, 2017 Thursday, May 7, 2020 Douglas Karr
Okwu blog bu ihe nno nma. Afọ ndị gara aga, mgbe m dere Gingde blọgụ maka Dummies, M hụrụ okwu ahụ n'anya blog n'ihi na ọ gosipụtara echiche nke ọdịdị na nghọta. Ndị ụlọ ọrụ agaghịzizi adabere na ịkọ akụkọ iji kpughee ọdịbendị ha, akụkọ ha, ma ọ bụ ọganihu ha. Ha nwere ike ikwusa ndị ahụ site na blọọgụ ụlọ ọrụ ha wee wuo obodo site na mgbasa ozi mmekọrịta nke gosipụtara ụdị ha. N'ime oge, ha nwere ike iwulite ndị na-ege ntị, obodo, na ịkwado.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịkekọrịta ozi a karịa akụrụngwa ha (nwere mgbasa ozi), ọ bụ ezie. Ha nwekwara ohere di egwu iji nụ olu ha na mbipụta ndị ọzọ (akwụ ụgwọ mgbasa ozi). Ha abụọ nwere ikike ikerịta (elekọta mmadụ media) ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ma bulie (akwụ ụgwọ mgbasa ozi). Usoro ahụ Bloglọ ọrụ ịde blọgụ bụ ịmachi, na okwu ahụ content Marketing buru ụzọ n'ime afọ ise gara aga na ikpuchi atụmatụ ndị ụlọ ọrụ na-agbasa site na mgbasa ozi nwere, mgbasa ozi akwụ ụgwọ, mgbasa ozi mmekọrịta, na isi mmalite mgbasa ozi akwụ ụgwọ. N'ụzọ na-akpali mmasị, na e dere otu akwụkwọ ahụ kpọmkwem ma kpọọ ya Ọdịnaya Ntanetị maka Dummies… ọ ga-abụrịrị oge. Ma okwu ahụ blog amachi oge ya.
A na-akpọ aha saịtị anyị Martech Zone na URL marketingtechblog.com. M na-eme otu ihe ahụ na saịtị m nke m mere na akwụkwọ m. Usoro ahụ blog kpalitere nzaghachi yiri nke ahụ. Usoro ahụ blog dara ụda, ahaziri iche, ma ọ bụghị dị ka ọkachamara. M zoro aka na saịtị ahụ mgbe niile dị ka a akwụkwọ. Ndị ọzọ na-ezo aka na blọọgụ ha dịka magazin dijitalụ. Agbanyeghị, ana m atụ ụjọ mgbanwe ngalaba n'ihi ikike njikwa njikwa m wuru na ngalaba ahụ, yabụ na anaghị m anwa anwa melite ya. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, mgbe Google kwụsịrị inye ntaramahụhụ ntugharị na gbakwunyere a Usoro mgbanwe usoro na njikwa njikwa.
O sikwaara anyị ike ịkekọrịta ngalaba anyị. Anyị na-ekwukarị ahịa-tech-blog-dot-com ma kọwaa ya ndị mmadụ mgbe anyị na-ekwurịta ya. Ọ bụghị ngalaba na-ewepụsị ire ma dị mfe ịtụgharị gaa URL nke mmadụ nwere ike icheta ma tinye n'ime ihe nchọgharị. Onwuchekwa abụrụla okwu ụlọ ọrụ nabatara maka ọrịre ahịa na azụmaahịa metụtara teknụzụ na azịza.
Achọrọ m ugboro ugboro maka ngalaba metụtara martech nwere ike ịdị nke dị mfe icheta… ma mesịa mechaa Uchechi (anyị nwekwara ahịa. teknụzụ mana nke ahụ dị ogologo).
ewebata Martech Zone
Anyị nyeere ọtụtụ ụlọ ọrụ aka ịkwaga na ngalaba ọhụrụ wee lelee ọkwa ha mechara mezie ma laghachi. Oge eruola ka anyị mee otu ihe ahụ ka m wee dọpụta plọg ahụ - mgbe afọ iri gachara - na Fraịde. O meela ka ọ dị mfe ịkwaga ihe ole na ole:
Ọ ga-eju gị anya na ị na-eji nke gị ngalaba aha na profaịlụ na saịtị ndị ọzọ! Echere m na ejiri m ya na iri puku kwuru ndebanye saịtị na saịtị ndebanye aha. Nke a abụrụla onye mepere anya!
Anyị ochie njikọ na ngalaba na-akpata ihe Akwụkwọ SSL. N'ihi ya, anyị enweghị ike ịtinye aha anyị na saịtị anyị ma weghachite ndị mmadụ. Anyị ga-anakwere saịtị nke abụọ na ngalaba ochie anyị, wụnye asambodo ma mee ntụgharị ọ bụla na ngalaba ọhụrụ. Anyị nwekwara ike iji ihe oyiyi mee nke a dịka anyị nwere URL ụfọdụ edepụtara site na ozi ịntanetị na ngwa mkpanaaka. M ka na-ahụ ihe ọ na-eme.
Anyị tufuru ihe niile anyị mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mkpa. Enweghị m nchegbu banyere nke a, anyị kwụsịrị ịkpọsa òkè ndị ahụ. O juru m anya na ọ nweghị nke nkenke nyiwe na nyiwe mmadụ na-agbaso njikọ dịka engines na-eme. Ọ dị ka ịgbaso URL ga-abụ ihe dị mma iji dozie data ha.
Ya mere, e nwere ya! Anyị na-now kwado niile anyị Njirimara na-elekọta mmadụ na saịtị na-amuma usoro ọhụrụ mbọn… anyị Akwụkwọ Martech, anyị Martech Zone Ajụjụ ọnụ Podcast, na ọwa anyị Martech na-elekọta mmadụ (lee otu anyị si eme gbanwere Twitter na-enweghị ndị na-eso ụzọ)!
Farewell Martech Zone ndewo Martech Zone!
Tags: mbọnna-agbanwe ngalabaụlọ ọrụ ịde blọgụ maka dummiesngalaba mgbanweBlog Ahịa Blogblog teknụzụ ahịaire erenkatamarte blogmartech zonena-adịgide adịgide redirectA
Ebumnuche 7 Mere Fordị Ndu Ji Nwụrụ Anwụ
onye na-ese ihe
Jenụwarị 29, 2017, elekere 8:08 nke abalị
HỤRỤ YA N'ANYA!